Azia Atsimo · Febroary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo · Febroary, 2013
Tantara mikasika ny Azia Atsimo tamin'ny Febroary, 2013
Bangladesh 18 Febroary 2013
Vitan'ny Artista Bangladeshi Sariitatra Ny Hetsi-Panoherana ao Shahbag
Mandroandroatra hatraty amin'ny andro faha-12 ny hetsi-panoherana ao amin'ny kianja Shahbag ao an-drenivohitr'i Bangladesh, izay itakian'ny olona an'arivony mivory ao ny fahafatesan'ireo meloka an'ady. Isan'andro no itakian'ireo olona an-jatony, tanora na antitra, avy amin'ny finoana sy lokom-bolonkoditra isan-karazany ny fanantonana ireo nahavita famonoam-bahoaka, fanolanana, fakana an-keriny, ary heloka hafa manapotika ny mahaolona nandritra ny...
Bangladesh 14 Febroary 2013
Bangladesh: Mitaky Ny Fanamelohana Ho Faty ireo Meloka an'Ady Tamin'ny 1971 ny Mpanao Fihetsiketsehana
Bangladesh 12 Febroary 2013
Roa amby efapolo taona. Izany ny fahalavam-potoana niandrasan'ny Bangladeshy rariny tamin'ny heloka mampihoron-koditra natao tamin'izy ireo nandritra ny adim-panafahana nataony hisintahana amin'i Pakistan. Ary tamin'ny 5 Febroary 2013 dia nohelohina mandra-pahafaty noho ny famonoana, fanaovana an-keriny, fampijaliana ary ny heloka hafa natao nandritra ny adim-panafahan'ny taona 1971 i Abdul Quader Mollah, sekretera jeneralin'ny...
India 11 Febroary 2013
Nisintaka ny tarika voalohany tsy ahitàna afa-tsy vehivavy miangaly gadona rock avy any amin'ny faritra Indiana iray rotiky ny ady ao Kashmir taorian'ny didy iray navoakan'ny mpitari-pivavahana silamo iray milaza fa tsy mifanaraka amin'ny maha-Silamo ny fitondrantenan'ireo vehivavy. Lasibatr'ireo fanimbazimbana tety anaty sy ivelan'ny aterineto ihany koa ilay tarika mpiangaly mozika nandalo toy ny aloka.
Andianà Mpizaha-tany Mandoto ny Ala-Mando (Mangrovy) Lehibe Indrindra Manerantany
Bangladesh 10 Febroary 2013
Manimba ny ala-mando lehibe indrindra manerantany ireo mpizaha-tany tsy mitsaha-mitombo be tabataba sy mpandoto ny tontolo iainana, mihitatra hatrany Bangladesh, atsinanan'i India izany izay toerana mampialoka Liona Mpanjaka Bengaly sy angona biby dia hafa maroloko tahaka ny ombilahy axis, voromanidina, voay, sy karazana bibilava samihafa. Amin'izao vanim-potoanan'ny ririninina izao, manintona ireo mpitsidika...
Chobi Mela VII: TaoSary Mampifandray Ny Mponina Manerana Izao Tontolo Izao
Bangladesh 07 Febroary 2013
Ao an-drenivohitry Bangladesh ao Dhaka no ankalazaina ny Chobi Mela (Sary Madio) faha-fito, fety iraisam-pirenena momba ny sary. Karakarain'ny Drik Picture Library Ltd. sy ny Pathshala (Ivon-toeran-tsary ao Azia-Atsimo), ity no fetiben'ny sary lehibe indrindra notontosaina tao Azia. Tamin'ny taona 1999 no namoronana ny hetsika ary isaky ny roa taona no ankalazàna izany ao...